Soo dejisan eM Client 7.2.36908 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: eM Client
Macmiilka eM – waa barnaamij isku dhafan si loo maareeyo xisaabaadka emailka badan. Software wuxuu taageersan yahay dhamaan sifooyinka aasaasiga ah ee sanduuqa boosta iyo wax ka qabashada adeegyada ugu muhiimsan e-mail sida Gmail, Outlook, Exchange, Yahoo !, iCloud, iwm. Iwm. Software wuxuu taageertaa jeega xarafka, wuxuu tarjumayaa waraaqaha la helay, si dhakhso ah u baaro oo u diraa boosta jadwalka. Macmiilka "eM" wuxuu ka kooban yahay jadwal dhejis ah oo loogu talagalay xasuusiyeyaasha, qayb ka mid ah sameynta hawlaha iyo maareynta isku xirka xidhiidhka. Software wuxuu soo diraa emailada la saxiixay oo la isugeeyey oo isticmaalaya teknooloojiyada PGP ama S / MIME. Macmiilka eM ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya inaad abuurto xogta xogta iyo soo dejinta macluumaadka macaamiisha kale ee kale.
Emayl qarsoodi ah
Nuqulo iyo saxiixyo
Soo dejisan eM Client
Faallo ku saabsan eM Client
eM Client Xirfadaha la xiriira